Wax ka ogoow shax laga sameeyay xiddigaha ugu qaalisan kubadda cagta ee Adduunka… (Neymar Jr, Maxamed Saalax iyo kuwo kale oo ka mid ah) – Gool FM
Wax ka ogoow shax laga sameeyay xiddigaha ugu qaalisan kubadda cagta ee Adduunka… (Neymar Jr, Maxamed Saalax iyo kuwo kale oo ka mid ah)
(Yurub) 27 June 2019. Wararka qaar ee ku aadan arimaha dhanka dhaqaalaha ayaa waxay daaha ka rogeen shax laga sameeyay xiddigaha ugu qaalisan kubadda cagta ee adduunka, ee ku aadan qiimaha suuqa ee ciyaartoyda, iyadoo ay hogaaminayaan xiddiga reer Masar ee Maxamed Saalax iyo kan reer Brazil ee Neymar Jr.
Sida laga soo xigtay tirakoobyada lagu soo daabacay bogga “Transfer Marquette” ee ku takhasusay arimaha dhaqaalaha ee dhanka isboortiga, shaxda laga sameeyay xiddigaha ugu qaalisan kubadda cagta ee adduunka ayaa waxaa laga dhex waayay kabtanka reer Argantina iyo kooxda Barcelona ee Lionel Messi iyo sidoo kale weeraryahanka Juventus ee Cristiano Ronaldo.
Shaxdan laga sameeyay xiddigaha ugu qaalisan kubadda cagta ee adduunka ayaa ka kooban qiimaha boos kasta ee kubadda cagta ah, sida lagu xusay xogtan maaliyadeed, weeraryahanka reer France iyo kooxda PSG ee Kylian Mbappé ayaana ah kan ugu sareeya kaasoo suuqa kala iibsiga ee ciyaartoyda kaga qiimeysan haatan aduun dhan 200 milyan oo euro.
Neymar Jr ayaa kaalinta labaad ka galay qiimeynta suuqa kala iibsiga (180 milyan oo euros), wuxuuna kaga sara maray Maxamed Saalax (150 milyan oo euros), oo kaalinta 3-aad ku jirta.
Hadaba xiddigaha ku soo baxay shaxda xiddigaha ugu qaalisan kubadda cagta ee adduunka ayaa kala ah:
Goolhaaye: Jan Oblak (goolhayaha Atlético Madrid – 100 milyan euro).
Daafacyada: Alexander-Arnold (Liverpool – oo ah 80 milyan euro), Virgil van Dijk (Liverpool – oo ah 90 milyan euro), Andrew Robertson (Liverpool – 60 milyan oo euro), iyo sidoo kale Kalidou Koulibaly (Napoli – 75 million 60 milyan oo euro).
Khadka dhexe: De Bruyne (Manchester City – 130 milyan euro), N’Golo Kanté (Chelsea – 100 milyan euro), Paul Pogba (Manchester United – 100 milyan euro).
Weerarka: Kylian Mbappé (PSG – 200 milyan oo euro), Neymar Jr (PSG – 180 milyan oo euros), Maxamed Saalax (Liverpool – 150 milyan oo euros).
RASMI: Barcelona oo ku dhawaaqday inay dhmeystirtay heshiiska ciyaaryahan cusub
“Neymar wuxuu doonayaa inuu soo laabto laakiin....” - Madaxweyne ku xigeenka Barcelona